Jackson Suber: Guul Cajiib ah oo ka dhacday White Sands Bahamas Casuumada NCAA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jackson Suber: Guul Cajiib ah oo ka dhacday White Sands Bahamas Casuumada NCAA
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
White Sands Bahamas NCAA Casuumad
Jackson Suber oo ka tirsan Ole Miss ayaa ku guulaystay tartankii ragga ee White Sands Bahamas ee NCAA Axaddii ee Koorsada Golf-ka ee Ocean Club ee Atlantis Resort iyo Ole Miss ayaa ku guulaysatay tartanka kooxda, iyadoo ku garaacday Bariga Gobolka Tennessee 11 istaroog.
Bariga Gobolka Tennessee wuxuu ku dhameystay kaalinta labaad ee tartanka 12-kooxood ee sharafta leh.
Suber, oo ah sarkaal sare oo ka yimid Tampa, Florida, ayaa ururiyay horyaalkiisii ​​saddexaad.
Inaad joogtid halkan Bahamas aad bay u weyn tahay. Inaad ku guulaysato jannada waxay ka dhigaysaa mid gaar ah. Mar kasta oo aad guuleysato, waa wax fiican. Laakiin inaad halkan ku guulaysato waa wax cajiib ah, ayuu yidhi Suber.
Suber, oo ah sarkaal sare oo ka socda Tampa, Florida, ayaa kaarka wareega ugu dambeeya ee 2-ka yar 70 ee koorsada 7,159-yard Ocean Club si uu ugu dhammeeyo wadar ahaan seddex wareeg oo 11 ka yar 205 hal istaroog oo ka fiican Tony Briggs ee San Francisco. Briggs wuxuu lahaa 7-jir ka yar 65, wareegga hoose ee usbuuca, halka Albin Bergstrom ee Koonfurta Florida uu ahaa istaroog kale oo ku soo laabtay kaalinta saddexaad ka dib xiritaanka 68.
A Ping All-American Mention Honorable Mention xilli ciyaareedkii hore ee jabhadaha xilli ciyaareedkii hore, Suber wuxuu soo ururiyay horyaalkiisii ​​saddexaad.
“Waxay u ahayd usbuuc weyn kooxdeena. Waxaan u ciyaarnay si adag,” Suber, 22, ayaa yiri. "Markaan ka soo baxnay maalintii ugu horeysay, waxaan si adag u cadaadinay labada maalmood ee soo socda, waxaana kor u qaadnay qorshahayaga ciyaarta. Way soo baxday - waxaana bilownay inaan ka soocno kooxaha kale. Inaad joogtid halkan Bahamas aad bay u weyn tahay. Inaad ku guulaysato jannada waxay ka dhigaysaa mid gaar ah. Mar kasta oo aad guuleysato, waa wax fiican. Laakiin inaad halkan ku guulaysato waa wax cajiib ah.”
"Jackson si aad ah ayuu u shaqeeyay. Waan ogahay inaan taas ka niraahno mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydeena, laakiin tani waxay soo socotay sanado. Wuu ku dhawaa, laakiin ilaa hadda ma jabin,” ayuu yidhi tababaraha fallaagada Chris Malloy. "Mar kasta oo aad ku guulaysato tartankan oo kale, meel sidan oo kale ah, inaad ku guulaysato jannada, xataa waa wax aad u gaar ah. Tani waa guushii ugu horeysay ee Jackson. "
Marka laga soo tago Suber, Ole Miss, oo hogaaminayay wareegii labaad ka dib, ayaa ka helay 10-ka sare ee Brett Schnell (T-7; 212), iyo Evan Brown (T-10; 213). Jack Gnam (T-29; 217) wuxuu soo koobay gooldhalinta jabhadaha markii ay ku dhammeeyeen 26-in ka yar 838.
“Koorsada, waxaan heysanay usbuuc aad u wanaagsan. Koorsada ka baxsan, way adag tahay in la garaaco Atlantis iyo Koorsada Golf-ka ee Naadiga Badweynta, "ayuu yidhi Malloy. "Waxaan aadnaa meelo badan oo fiican, laakiin ma hubo inta ay le'eg tahay tan. Si aad ula kulanto Bahamas waxay ahayd mid la yaab leh, muuqaallada iyo dhawaaqyadu waa kuwa labaad ee aan midna jirin. "
Waxaa hogaaminaya Briggs iyo Soren Lind, kuwaas oo ku dhameystay T-7 oo leh 4-in ka yar 212 wadar ahaan, Bariga Tennessee State ayaa dhaliyay 849 si ay ugu dhameystaan ​​​​labaad halka San Francisco ay ku xirtay kaalinta seddexaad 851 iyada oo martida loo yahay Arkansas ee Little Rock, taasoo keentay wareegii koowaad ka dib. Koonfurta Florida waxay ahayd shanaad oo leh 852 wadarta.
Todobaad ka hor, inta lagu guda jiro todobada koox Martiqaadka Haweenka Cad Cad Sands Bahamas NCAA, Kirsten Baete of Nebraska ayaa toogtay wareega ugu dambeeya xitaa-par 72 oo dhajiyay 10-hoos 206 guul silig-ilaa-silig ah oo ay ku garaacday Campbell's Emily Hawkins. Dhanka kala sarreynta kooxda, Campbell, oo ay ku jiraan saddex ciyaartoy oo ku dhameystay 10-ka sare, ayaa ku garaacay Cornhuskers XNUMX-dhibcood, halka Jaamacadda Miami ee martida loo yahay ay ku dhameysatay kaalinta seddexaad.
Martiqaadka caanka ah ee White Sands Bahamas NCAA, oo ay ka muuqdaan qaar ka mid ah kooxaha golf-ka ee ugu sarreeya Maraykanka, ayaa soo gabagabeeyay sannadkiisii ​​labaad oo leh laba toddobaad oo guulo ah oo tartan xooggan ah, muddo gaaban gudaheedna waxay noqotay mid ka mid ah kulannada golf-ka ee ugu sarreeya xubnaha NCAA dugsiyada.
"Waxay ahayd usbuuc cajiib ah, sharaf bayna ii ahayd in aan halkan ku soo dhaweeyo Bahamas," Jake Harrington, oo ah tababaraha golf-ka ee kooxda ragga ee Arkansas ee Little Rock. "Tani waxay ahayd dhacdo heerka koowaad ah, shakina kuma jiro, waxay noqon doontaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu horreeya ee golf-ka kulliyadda."
Subeer oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi “Tartanka oo dhan waxa uu u qabsoomay si wanaagsan; waxay ahayd dhacdo heer caalami ah. Waxay ahayd wax cajiib ah inaan ku soo koobo xilliga dayrta halkan, gaar ahaan cimilada, xeebta, iyo wax kasta oo Atlantis ay bixiso. Shaki la'aan, waxaan isla markiiba kula talin lahaa khibradan asxaabta mustaqbalka iyo dugsiyada kale."
Toddobaad ka baxsan koorsada golf-ka ee Bahamas, waa toddobaad jannada ku jira, "ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Ku-Xigeenka The Honorable I. Chester Cooper, Bahamas Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada. "Runtii waxay ahayd farxad inaan ku martigeliyo qaar ka mid ah goleyaasha sare ee koorsada Golf Club Ocean, waxaana rajeyneynaa in dhammaan ciyaartoyda tartamaya ay ku raaxaystaan ​​waqtigooda halkan Bahamas. Waxaan ku martiqaadeynaa dhammaan dadka xiiseeya kubbadda cagta, hadday yihiin kuwa cusub ama kuwa xirfadle ah inay nala soo kulmaan wareeg ama laba golf ah."
Iyada oo in ka badan 700 jasiiradood iyo cays iyo 16 jasiiradood oo gaar ah, Bahamas waxay ku taal meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, iyada oo bixisa duullimaad fudud oo duullimaadyo ah oo ka fogeeya maalintooda. Jasiiradaha Bahamas waxay leeyihiin kalluumaysi heer caalami ah, quusis, doon doon ah, iyo kumanaan mayl oo biyaha iyo xeebaha ugu quruxda badan ee dhulka sugaya qoysaska, lammaanaha, iyo tacaburayaasha. Sahami dhammaan jasiiradaha ay ku bixiyaan bahmas.com ama Facebook, YouTube or Instagram si aad u aragto sababta ay uga Fiican tahay Bahamas-ka.
KU SAABSAN KOORSKA GOLF -KA KOOBKA
Koorsada Golf Club Ocean Club ee Atlantis Paradise Island waxay bixisaa koorso adag oo qurux badan oo loogu talagalay goleyaasha doonaya ciyaaraha horyaalnimada. Si xushmad leh u uuraysatay, Tom Weiskopf oo loogu talagalay 18-dalool, koorsada horyaalnimada 72 waxay fidsan tahay in ka badan 7,100 yaard oo ku taal jasiiradda Atlantis. Koorsadu waxay martigelisay dhacdooyin isboorti oo caan ah sida Michael Jordan Celebrity Invitational (MJCI), Michael Douglas & Friends Celebrity Golf Tournament, iyo Pure Silk-Bahamas LPGA Classic.
Loogu talagalay White Sands Bahamas Casuumada NCAA
Xiriirka: Mike Harmon